Artist Zarihuun Wadaajoo rakkoo fayyaa cimaaf saaxilamee Hospitaala ciisaa jiruuf, birmannaa ummataa barbaanna jedhan maatiin. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVArtist Zarihuun Wadaajoo rakkoo fayyaa cimaaf saaxilamee Hospitaala ciisaa jiruuf, birmannaa ummataa barbaanna jedhan maatiin.
Artist Zarihuun Wadaajoo rakkoo fayyaa cimaaf saaxilamee Hospitaala ciisaa jiruuf, birmannaa ummataa barbaanna jedhan maatiin.
Artist Zarihuun Wadaajoo dhibee cimaaf saaxilamuun Hospitaala Riftivaalii Adaamaa ciisee wal’aanamuu erga eegalee ji’a tokko darbeera. Zarihuun yeroo ammaa dhibee Sombaa, Kaleefi Narviitiin dhibamee haala ulfaataa keessa jiraachuu ibsan Ogeeyyiin Fayyaa Hospitaalichaa. Wal’aansa fooyya’aa yoo argate garuu dhibee isa mudate kana dandamachuu nidanda’a jedhan.
Haati Warraa Artist Zarihuun Wadaajoo Aadde Olaantuu Gammachuu, Ogeeyyiin Fayyaa Hospitaalichaa gargaarsa barbaachisu taasisaafii turuu ibsan. Yeroo ammaa garuu haalli fayyummaa Zarihuun wal’aansa olaanaa kan barbaadudha jedhu. Sababuma kanaaf hospitaalichi gara bakka wal’aansa ga’aa argachuu danda’uutti ‘Riiferii’ barreessaafii jiraachuus ibsan. Haata’u malee, Zarihuun wal’aansa isa barbaachisu akka argatu gochuun humna maatii oli jedhu.
“Artist Zarihuun guyyaa tokkollee ofiif jiraatee hin beeku. Amma isa dhukkubsatee haala kana keessa jirullee, waa’ee uummatasaa dhiphata” kan jedhan aadde Olaantuun, Zarihuun bara jireenyasaa Oromoof jiraate malee qabeenya dhuunfaasaa horachuu irratti hin xiyyeeffanne jedhu. Zarihuun wal’aansa barbaachisuun akka argatuuf ummanni Oromoo inni jiraateef akka birmatuuf maatiinsaa gaafataniiru.
Fayyummaa Zarihuuniin deebisuun ni danda’ama, kanaaf ammoo yaala gahaatu isa barbaachisa kan jedhan ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa gama isaaniin, Artist Zarihuun Wadaajoo waldhaansa ga’aa argatee fayyummaasaatti akka deebi’uuf ummannis ta’e qaamoleen gargaarsa gochuufii danda’an nama kana bira akka dhaabbataniif waamicha dabarsaniiru.
Zarihuun Wadaajoo Artistii jabaa yeroo dheeraaf ogummaa isaatiin ummatasaaf sagalee ta’aa turedha. Zarihuun nama roorroof hin jilgeenfanne, yeroo mara ummanni dammaqee cunqursaa sirna abbootii hirree akka qolatuuf nama sabasaa dammaqsaa turedha.
“Zarihuun Artistii kaayyoo isaatti cichuun beekamu, nama haala kamuu keessatti faayidaa dhuunfaa ofiitiif jecha toora qabsoo sabaarraa maqee hin beeknedha” jechuun namoonni hedduun ragaa ba’uuf.
Artist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee Hospitaala Riftivaalii Adaamaa ciisee jiraachuu maatiin OMN-tti himan. Artist Zarihuun…